Iimpazamo ezine zabantu abadala ezijongela phantsi ubuchule babantwana | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Iimpazamo ezine zabantu abadala ezijongela phantsi ubuchule babantwana
Xa usiva eli binzana amaxesha amaninzi: "Ungakhathazeki, usengumntwana kwaye akaqondi". Njengebinzana elikhuthaza: "Mnike iselfowuni kwaye uthule." Okanye ezinye ezininzi, ezibandakanya: "Into ekufuneka uyenzile kukufunda, ixesha." Kubonakala ngathi ayikho enye imfundo kwaye ayikho enye indlela yokuphuma kubantu abafundayo kwaye ukuba kunokwenzeka, bethule, bethule kwaye bengahoyanga nantoni na engaphaya kwencwadi yesikolo. Ezi ziimpazamo ezine esizenzayo sibadala.
Ngamanye amaxesha, ubukhulu becala, abantu abadala basebenzisa la mabinzana ukuba bangazibopheleli kuqala, kwaye okwesibini, ungazikhathazi. Ezi zinto ziqhelekile kangangokuba sizibona zisengqiqweni. Kwaye siyababandakanya kwireferensi yethu njengabantu abadala. Kodwa xa uziqokelela kwaye uziqonda, azibonakali ngathi zininzi, akunjalo?
1 Nika impumelelo yakho ngemivuzo esemgangathweni ophantsi yoyilo
2 Yenza izimvo zakho
3 Ncokola naye
4 Imisebenzi enyanzelekileyo, ibenze bonwabe
Nika impumelelo yakho ngemivuzo esemgangathweni ophantsi yoyilo
Ngokwesiqhelo iigummies ziyabetha ngombala wazo kwaye nangakumbi kwiswekile. Inye ipilisi ine engapheliyo izimvo ezisalindelwe. Loo mivuzo isetyenziswa kakhulu xa into ihambe kakuhle. IpheKodwa ekugqibeleni siyamqhela unyana wethu ukuba ukwenza into elungileyo kuyambuyekeza ngokonqena. Into ebususa ngokupheleleyo ubuchule. Dlala ikhonsoli yomdlalo, bukela umabonwakude, okanye uzulazule kwi-YouTube. Xa sinokuvuza nge-apile, eliluhlaza kanye njengengwenya yejeli kwaye likwaneswekile. Iswiti, kodwa isempilweni. Thenga isixhobo, umculo. Ikhamera, ukufota. Izixhobo zokwakha okanye iibrashi zokuzoba.
Yenza izimvo zakho
Kuba singabazali, sizama ukukhokela abantwana bethu kwindlela elungileyo. Oku kuyakwenza lula ubomi kuthi nakubo. Umthi kufuneka ube luhlaza ngaphezulu kwaye umdaka esiqwini. Akukho meko ngokuchaseneyo, kwaye namagqabi aluhlaza. Indlu kufuneka ibe nomfanekiso ofanayo, unxantathu wophahla.
Ukukholelwa ukuba ngokungaziqondi ezi ngcamango zisisiseko, uyaphazama kukususa ilizwe ocinga ngalo. Mhlawumbi wayibona ngolu hlobo kwiphupha lakhe lokugqibela xa wayelele. Okanye nakwilizwe elimnandi awalenzayo ngaphambili. Ukuba umntu uxelele uRobert Khan ukuba akunakwenzeka ukuthumela iifayile kwilizwe elibonakalayo, mhlawumbi ngekhe sibe ne-intanethi kwaye siyayazi. Oko kwakukude nokuba ngumthi oluhlaza onesiqu esimdaka. Zama ukuzazisa kwihlabathi labo, ungalitshintshi.
Xa sisitsho kuba mncinci okanye mncinci akazukuqonda. Ukuba kungcono ungachazi izinto kuye, ungapheleli nje kuye kwixesha elifutshane. Njengomntu omkhulu akanako ukudala imibuzo ngesizathu sokuba acinge ukuba kufanele ukuba sele eyazi. Ukungabinazo iimpendulo kwimibuzo yakho ngexesha owawubabuza ngalo, unokuziva ulinganiselwe njengomntu omkhulu.
Imisebenzi enyanzelekileyo, ibenze bonwabe
Ukusuka eFinland basixelele ukuba akufuneki sifundise kuphela imathematics, isiNgesi okanye iJografi. Kwaye awuzifundisi ezo zifundo usihlalo. Kwaye kukuba ekhaya kufanele ukuba kufane, hayi ngemisebenzi yesikolo kuphela, kodwa nakwabo basekhaya. Sithanda ukunyanzela imisebenzi yasekhaya ngendlela edikayo, siyidlulisele komncinci. Ihlala ikhatshwa yifayile ye- ukuxabana Ndiyathemba ukuba uza kuyizalisekisa ngaphambili nangokonwaba.
Ukukhangela enye indlela, njengokuhamba nabo kunye nokwenza imidlalo ngalo msebenzi inokukhuthaza umnqweno wakho wokwenza njalo. Ukongeza ekujonganeni nezinto ezinje ngokutya okanye impahla. Imibala emitsha, iithoni, iincasa, amavumba kunye nezinto ezahlukeneyo ozithandayo. Konke oku kugxile kwintsebenzo elungileyo yoyilo. Njengo inyanzelekile ukudlala imidlalo.
Nanga amanye amanyathelo onokuwathatha ukwazisa unyana okanye intombi yakho kubomi bokuyila ngakumbi. Inyaniso yokuba bayashukuma, baphande, bazame kwaye baphuhlise izimvo ezahlukileyo zidala inkxalabo ekufuneka beyenzile kwaye babe yiyo, eya kuthi kamva ibancede babe nobuchule obungakumbi. Ezi ziikhonsepthi ezimbalwa kunye nemibono. Ingaba ucinga ntoni?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Iimpazamo ezine zabantu abadala ezijongela phantsi ubuchule babantwana
Ii-CV ezisixhenxe eziya kuchukumisa nayiphi na inkampani
Iimpawu ezintlanu ezitshintshe ilogo yazo ukuphakamisa ulwazi